အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ (အလုပ်အကိုင်အတွက်) ｜｜ Genvers
အလုပ်ကြော်ငြာများတင်ရန်အတွက်စည်းကမ်းများ - အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
စုဆောင်းသူအားသတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဝေသူများသို့ - ပို့စ်တင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းနည်းများ
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအတွက်အလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက် Genvers စာမူသတ်မှတ်ချက်များ
၀ န်ဆောင်မှု၏ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
■အပိုဒ် ၁ (လျှောက်လွှာပုံစံ)
ဤသဘောတူစာချုပ်တွင် List ကုမ္ပဏီလီမိတက် (အောက်တွင် "ငါတို့ကုမ္ပဏီ" ဟုရည်ညွှန်းပြီး) နှင့်၎င်းနှင့်ဆက်စပ်နေသော ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးမှစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်သည့်အလုပ်သတင်းအချက်အလက် ၀ က်ဘ်ဆိုက် "Genvers" နှင့်၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများအားအသုံးပြုရန်ပြဌာန်းထားသည်။ ကုမ္ပဏီနှင့်လျှောက်ထားသူနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူများအကြားရှိဆက်ဆံရေးအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည် (နောင်တွင်“ အသုံးပြုသူများ”) ။
■အပိုဒ် ၂ (ဤ ၀ န်ဆောင်မှု၏မာတိကာနှင့်ဝန်ဆောင်ခ)
၁။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် ၀ န်ဆောင်မှုအသုံးပြုခကိုအသုံးပြုသူ၏ကြော်ငြာကြော်ငြာအတွက်တင်ရန်နှင့်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်အဓိကကျသည်။
၂။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အနေဖြင့်အသုံးပြုသူသည်ကုမ္ပဏီမှသတ်မှတ်ထားသော ၀ န်ဆောင်မှုအသုံးပြုခကိုသီးခြားစီချုပ်ဆိုထားသောစာချုပ်အပေါ် အခြေခံ၍ ကုမ္ပဏီသို့ပေးရမည်။
၄။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အသုံးပြုသူများအားအလုပ်ရှာဖွေသူများအားမိတ်ဆက်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်အကြံပြုခြင်းမပြုပါ။ အသုံးပြုသူများကိုခန့်ထားခြင်းကိုအာမမခံပါ။
၅။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်အသုံးပြုသူမှပေးသောအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏လက်ရေးမူများဆိုင်ရာစာမူကိုလွတ်လပ်စွာပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
■အပိုဒ် ၃ (စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း)
၁။ အသုံးပြုသူသည်ဤသဘောတူညီချက်ကိုသဘောတူပြီးနောက်လျှောက်လွှာပုံစံရှိလိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစာချုပ် (နောက်မှ“ ဤစာချုပ်”) ကိုလျှောက်ထားရမည်။ထို့အပြင်အသုံးပြုသူနှင့်ကုမ္ပဏီသည်ဤသဘောတူညီချက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများကိုစာဖြင့်ရေးသားထားသောစာချုပ်တစ်ခုစီကိုချုပ်ဆိုပါကစာချုပ်တစ်ခုချင်းစီ၏သတ်မှတ်ချက်သည် ဦး စားပေးရမည်။
၂။ ဤစာချုပ်ကိုကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ရှေ့အပိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသောလျှောက်လွှာအတွက်လိုအပ်သောစာမေးပွဲများပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုလက်ခံခြင်းသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုအသိပေးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ရမည်။
■အပိုဒ် ၄ (ID / စကားဝှက်ပေးခြင်းနှင့်စီမံခြင်း)
၁။ အသုံးပြုသူသည်ကုမ္ပဏီမှပေးသော ID / စကားဝှက်ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်စီမံခြင်းအတွက်တာ ၀ န်ယူရမည်။ အသုံးပြုသူနှင့်ကုမ္ပဏီအကြားသီးခြားပြprovision္ဌာန်းချက်မရှိပါက ID / password ကိုအသုံးပြုရမည်။ တတိယပါတီမှအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ငှားရမ်းခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ကတိပြုခြင်းများကိုပြုလုပ်သည်။
၂။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသူအားပေးသော ID / စကားဝှက်နှင့်အသုံးပြုလျှင်၎င်းသည်တတိယပါတီမှအသုံးပြုသည်ဆိုလျှင်၎င်းကိုအသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမှုအဖြစ်မှတ်ယူပြီးအသုံးပြုသူသည်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုဖြင့်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ၎င်း၏အသုံးပြုမှုအတွက်အားလုံးတာဝန်။သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်ရှိမှုကြောင့်၎င်းသည်သက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။
■အပိုဒ် ၅ (လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်)
၁။ အသုံးပြုသူနှင့်ကုမ္ပဏီတွင်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ပါတ်သက်၍ သိရှိထားသောအခြားပါတီ၏ (ဤစာချုပ်ပါအကြောင်းအရာများအပါအ ၀ င်) စီးပွားရေးနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များရှိသည် (နောင်မှ စုပေါင်း၍“ လျှို့ဝှက်အချက်အလက်” ဟုခေါ်ဆိုသည်) နှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကြိုတင်ရေးသားထားသောခွင့်ပြုချက်မရဘဲစုဆောင်းခြင်းရွေးချယ်ခြင်းကဲ့သို့သောမူလရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘဲအခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးမပြုရပါ။ (ဤသဘောတူညီချက်တွင်ပါ ၀ င်သောကန်ထရိုက်တာများမှအပ) တတိယပုဂ္ဂိုလ်အားထုတ်ဖော်ခြင်းသို့မဟုတ်ပေါက်ကြားခြင်းမပြုရပါ။ထို့အပြင်အခြားအဖွဲ့အားလျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်သည့်အခါအသုံးပြုသူနှင့်ကုမ္ပဏီသည်၎င်းသည်လျှို့ဝှက်ကြောင်းဖော်ပြရမည်။သို့သျောလညျးကိုအောက်ပါပစ္စည်းများမဆိုအောက်မှာကျသောသတင်းအချက်အလက်လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်မှဖယ်ထုတ်ပစ်ရလိမ့်မည်။
(၁) ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်သည့်အချိန်တွင်သိမ်းဆည်းထားသောသို့မဟုတ်လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်သူများနှင့်ထုတ်ဖော်ပြီးနောက်လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည့်ပါတီ၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားအရလူသိများလာသူများ (နောင်တွင်သူသည် "လက်ခံသူ" ဟုရည်ညွှန်းသည်) ။
■အပိုဒ် ၆ (အလုပ်အကိုင်အချက်အလက်ကိုထုတ်ဖော် / ထုတ်ဖော်ခြင်း)
၁။ လျှောက်ထားသူသည်လျှောက်လွှာပုံစံပေါ် မူတည်၍ ကုမ္ပဏီမှလုပ်ကိုင်သောအလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက် site ပေါ်တွင်အလုပ်တစ်ခုကိုကြော်ငြာသူကတင်လိုက်သောအခါအလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက်ကိုပေါ်တယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်နွယ်သောတတိယပါတီ၏စသည်တို့ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူသည်၎င်းကိုတင်ရန်အတွက်ကြိုတင်သဘောတူသည်။
၂။ ဤပုဒ်မပါပြprovisions္ဌာန်းချက်များသည်ပုဒ်မ ၅ ပါပြconfidential္ဌာန်းချက်များ (လျှို့ဝှက်ထားမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်တာ ၀ န်ယူမှု) ထက် ဦး စားပေးရမည်။
XNUMX. အကယ်၍ စာချုပ်သည်ဤသဘောတူညီချက်ပါပြor္ဌာန်းချက်များကြောင့်သို့မဟုတ်သဘောတူညီချက်ကြောင့်ပယ်ဖျက်ခံရပါကအလုပ်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ကြေငြာချက်အားဖျက်သိမ်းသည့်နေ့စွဲတွင်ဆိုင်းငံ့လိမ့်မည်။
■အပိုဒ် ၇ (မူပိုင်ခွင့်နှင့်အခြားပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများစသည့်ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်များ)
၁။ အသုံးပြုသူနှင့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ဤသဘောတူစာချုပ်အကြားသီးခြားကောက်ချက်ချသည့်စာချုပ်တွင်မပါ ၀ င်ပါကဤ ၀ န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်ကုမ္ပဏီမှပေးသောသတင်းအချက်အလက် (၎င်း၏စုစုပေါင်းအပါအ ၀ င်) နှင့်ပတ်သက်သည့်မူပိုင်ခွင့်များနှင့်အခြားပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများသည်ပိုင်ဆိုင်ရမည်။ ကုမ္ပဏီ။
၂။ အသုံးပြုသူသည်ကုမ္ပဏီအားယခင်ကမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှု (ယခုမှအောက်တွင် "အသုံးပြုသူပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေး" ဟုခေါ်သည်) ကိုအသုံးပြုသူကပေးသောဓာတ်ပုံများ၊ လိုဂိုအမှတ်အသားများ၊ စာရွက်စာတမ်းများစသည်တို့၏ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးသည်အသုံးပြုသူနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သို့သော်ဤ ၀ န်ဆောင်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းအတာအတွင်းဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက်တွင်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာ (သတင်းအချက်အလက်၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ ကုမ္ပဏီအတွက်သီးသန့်မဟုတ်သောလိုင်စင်သတ်မှတ်ထားသည်ဟုမှတ်ယူသည်။ထို့အပြင်အသုံးပြုသူသည်ဤပါ ၀ င်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ စာရေးသူ၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများကိုအသုံးမပြုရ။
■အပိုဒ် ၈ (အသုံးပြုသူ၏တာဝန်)
၁။ အသုံးပြုသူများသည်အလုပ်အကိုင်လုံခြုံရေးဥပဒေ၊ အလုပ်သမားစံချိန်စံညွှန်းဥပဒေ၊ အလုပ်သမားများအားအလုပ်ဖြန့်ချိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစေလွှတ်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ အလုပ်ခွင်နယ်ပယ်ရှိအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအားတန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးနှင့်အခွင့်အရေးများကိုတန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးပေးခြင်းနှင့်အလုပ်သမားများအားသင့်လျော်သောလည်ပတ်မှုသေချာစေခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဥပဒေကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ သူနာပြုပြုစုစောင့်ရှောက်မှုခွင့်စသည်တို့။ ကလေးသူငယ်များသို့မဟုတ်မိသားစုစောင့်ရှောက်မှုလုပ်သားများ၏လူမှုဖူလုံရေးနှင့်ပတ်သက်သောဥပဒေ၊ စက်မှုလုံခြုံမှုနှင့်ကျန်းမာရေးဥပဒေ၊ အလုပ်အကိုင်အာမခံဥပဒေ၊ ကျန်းမာရေးအာမခံဥပဒေ၊ ၀ န်ထမ်းများ၏ပင်စင်အာမခံဥပဒေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများအလုပ်အကိုင်စသည်တို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ဥပဒေ။ တည်ငြိမ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောဥပဒေ၊ သို့မဟုတ်အခြားအလုပ်သမားဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်သောအရေးယူမှု။
၂။ အသုံးပြုသူသည်ကုမ္ပဏီ၏ကြိုတင်ရေးသားထားသောခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မှလွဲ၍ ကုမ္ပဏီ၏ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အကြောင်းအရာများကိုကူးယူထုတ်ဝေခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ချေးငှားခြင်း၊ ဘာသာပြန်ခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုသည်
၃။ အကယ်၍ အသုံးပြုသူသည်ယခင်စာပိုဒ်ကိုဖောက်ဖျက်ပါကကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အလုပ်၏သတင်းအချက်အလက်၊ ကူးယူခြင်း၊ ပြန်လည်ပုံနှိပ်ခြင်းစသည်တို့ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဆိုင်းငံ့ပိုင်ခွင့်နှင့်အသုံးပြုသူမှရရှိသောအမြတ်နှင့်ညီမျှသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ချိုးဖောက်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်လျော်ကြေးငွေတောင်းခံနိုင်သည်။
၄။ အသုံးပြုသူကအလုပ်အချက်အလက်များ၏ပါ ၀ င်မှုသည်အချက်အလက်များနှင့်မဆန့်ကျင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုအာမခံသည်။
ကုမ္ပဏီများအားအလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ဓာတ်ပုံများ၊ လိုဂိုအမှတ်အသားများ၊ စာရွက်စာတမ်းများစသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည့်အခါမူပိုင်ခွင့်လုပ်ထားသည့်အလုပ်များ၊ ပုံတူများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ အသံများစသဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုရန်အတွက်လိုအပ်သောအရာများ၊ အခြားဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ပိုင်ဆိုင်သည်သို့မဟုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်သည်ဟုအာမခံသည်။
ငွေတောင်းခံလွှာ၏အမည်၊ လိပ်စာသို့မဟုတ် ဦး တည်ရာပြောင်းလဲမှုရှိပါကအသုံးပြုသူသည်ကုမ္ပဏီအားချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်။
၇။ အသုံးပြုသူသည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အတွက်မိမိ၏အသုံးစရိတ်နှင့်တာ ၀ န်အားဖြင့်ကွန်ပျူတာဆိပ်ကမ်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများကိုဝယ်ယူခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်၎င်းကိုနည်းပညာအဆင့်နှင့်အညီထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရမည်။ထို့အပြင်အသုံးပြုသူသည်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဆက်သွယ်ရေးစရိတ်၊
■အပိုဒ် ၉ (သတင်းအချက်အလက်အသုံးပြုခြင်း)
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှု၊ စာမျက်နှာအမြင်များ၊ အခြားအသုံးပြုမှုမှတ်တမ်းများစသည်တို့မှသုံးစွဲသူများမှပေးသောကုမ္ပဏီ၏သတင်းအချက်အလက်နှင့်အလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်၊ လူတစ် ဦး ချင်းစီကိုခွဲခြား သတ်မှတ်၍ မရနိုင်စေရန်၊ သူတို့ကိုစာရင်းအင်းအချက်အလက်များကိုဖန်တီးခြင်း၊ မည်သည့်ကန့်သတ်မှုမရှိဘဲ။
■အပိုဒ် ၁၀ (ဤ ၀ န်ဆောင်မှုအကြောင်းအရာအာမခံချက်မရှိပါ။ )
၁။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှု၏အရည်အသွေးနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်၊ အလုပ်ရှာဖွေသူသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုမှရရှိသောအခြားသတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီ၏ပြည့်စုံမှု၊ တိကျမှု၊ အသုံး ၀ င်မှုစသည်တို့သည်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့အာမခံချက်မရှိပါ။ထို့အပြင်၊ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်အသုံးပြုသူအားပေးအပ်ထားသောအခြားသတင်းအချက်အလက်အားလုံးနှင့်ဒေတာဘေ့စ်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသူမှပြုလုပ်သောစုဆောင်းမှု၊ စုဆောင်းမှုနှင့်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများ၏ရလဒ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာ ၀ န်မရှိပါ။
၂။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးအပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောတတိယပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်ပွားပါကကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသို့မဟုတ်ကြီးလေးသောပေါ့ဆမှုရှိပါကတာ ၀ န်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ အသုံးပြုသူသည်အသုံးပြုသူသည်၎င်းကိုသူ / သူမ၏စွန့်စားမှုနှင့်စရိတ်ဖြင့်ဖြေရှင်းရမည်။
■အပိုဒ် ၁၁ (ဤဝန်ဆောင်မှု၏ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပြတ်တောက်ခြင်းစသည်တို့)
၁။ ကုမ္ပဏီသည်ကုမ္ပဏီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၂။ ကုမ္ပဏီသည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပြောင်းလဲလိုက်သောအခါကုမ္ပဏီသည်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလအတွင်းအသုံးပြုသူသည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှု (သို့) မှတ်ပုံတင်သည့်အခါပြောင်းလဲသွားသောအကြောင်းအရာများနှင့်ပြောင်းလဲသည့်အကြောင်းအရာကိုအသိပေးအကြောင်းကြားပြီးနောက်သုံးစွဲသူအားအကြောင်းကြားရမည်။ ဖျက်သိမ်းခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အသုံးပြုသူသည်ဤဝန်ဆောင်မှုပြောင်းလဲမှုကိုသဘောတူခဲ့သည်ဟုမှတ်ယူလိမ့်မည်
၃။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှု၏အားလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းများအတွက်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ရှေ့အပိုဒ်အရတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
၄။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အောက်ပါကိစ္စများတွင် ၀ န်ဆောင်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်အားလုံးကိုဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်။ဒီကိစ္စမှာကျွန်ုပ်တို့မှာတာဝန်မရှိဘူး။
service ဤ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကိုပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းကိုအရေးပေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
fire မီး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုနှင့်စသည်တို့ကြောင့်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုမရရှိနိုင်ပါက
service ငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ မီးတောင်ပေါက်ခြင်း၊ ရေကြီးခြင်းနှင့်ဆူနာမီကဲ့သို့သောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြောင့်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုမရရှိနိုင်ပါက။
war စစ်မှု၊ မငြိမ်မသက်မှုများ၊ အဓိကရုဏ်းများ၊ မငြိမ်မသက်မှုများ၊ အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှုများကြောင့်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုမရရှိနိုင်ပါက
failure ဤဝန်ဆောင်မှုကိုကွန်ယက်ပျက်ကွက်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြား ရှောင်လွှဲ၍ မရနိုင်သောအင်အားများကြောင့်မပေးနိုင်ပါ
operational ထို့အပြင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသို့မဟုတ်နည်းပညာဆိုင်ရာပြproblemsနာများကြောင့်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုမရရှိနိုင်ပါက
service ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားရန်နှင့်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်သည့်အခါ
■အပိုဒ် ၁၂ (ဖျက်သိမ်းခြင်းကိုအချိန်မတန်မီ)
၁။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အသုံးပြုသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်ဤစာချုပ်ကိုတစ်ဝက်ကျော်ဖျက်သိမ်းနိုင်မည်။
၂။ ရှေ့စာပိုဒ်အရဤစာချုပ်ကိုရပ်ဆိုင်းသည့်အခါကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အသုံးပြုသူထံမှရရှိသောအခကြေးငွေများကိုပြန်အမ်းမည်မဟုတ်ပါ။ အသုံးပြုသူမှဤစာချုပ်တွင်ကုမ္ပဏီနှင့်သဘောတူထားသည့်အတိုင်းမဟုတ်ပါကအခြားကိစ္စများမပါရှိပါကသင်ငွေပေးချေရန်တာဝန်ရှိသည်။ အခကြေးငွေ၏မပြီးဆုံးသေးသော / မရတဲ့သောအဘို့ကို။
၃။ အချိန်မတန်ဘဲဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ အဆိုပြုလွှာ၊ လက်ကမ်းစာစောင်၊ သီးခြားစီချုပ်ဆိုရန်စာချုပ်စသည်တို့တွင်ပါ ၀ င်ပါကထိုပြဌာန်းချက်များကို ဦး စားပေးအသုံးပြုရမည်။
■အပိုဒ် ၁၃ (အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်း)
၁။ အကယ်၍ အသုံးပြုသူသည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ကုမ္ပဏီအားပျက်စီးစေပါကအသုံးပြုသူမှကုမ္ပဏီအားလျော်ကြေးပေးရမည်။
၂။ အကယ်၍ အသုံးပြုသူသည်တတိယပါတီမှတိုင်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိပါကသို့မဟုတ်ဤဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆက်စပ်၍ တတိယပါတီနှင့်အငြင်းပွားမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါကအသုံးပြုသူသည်ကုမ္ပဏီနှင့်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများကိုကုမ္ပဏီအားချက်ချင်းအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ ငါတို့၏တိုးတက်မှုနှင့်ရလဒ်များကိုအငြင်းပွားပြီးအစီရင်ခံပါ။
၃။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်တတိယပါတီမှတိုင်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိပါကသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူကဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တတိယပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အငြင်းပွားမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါကအသုံးပြုသူသည်သုံးစွဲသူ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်တာ ၀ န်ယူမှုအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။ တိုင်ကြားချက်သို့မဟုတ်အငြင်းပွားမှု၊ တိုးတက်မှုနှင့်ရလဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထံအစီရင်ခံပြီးကျွန်ုပ်တို့ပေးရမည့်တာ ၀ န်ပမာဏနှင့်အခြားလျော်ကြေးများကိုလျော်ကြေးပေးပါ။
၄။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်အခါကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အသုံးပြုသူအားသူမရည်ရွယ်ထားသောသို့မဟုတ်အကြီးအကျယ်ပေါ့ဆမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်လျော်ကြေးပေးရမည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသို့မဟုတ်အကြီးအကျယ်ပေါ့ဆမှုရှိပါကဤသတ်မှတ်ချက်များရှိကျွန်ုပ်တို့၏ငြင်းဆိုမှုများသည်သက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။
XNUMX. အကယ်၍ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ရှေ့စာပိုဒ် (သို့) ဥပဒေအရပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာ ၀ န်ရှိပါကလျော်ကြေးပေးရန်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်အတိုင်းအတာအားအသုံးပြုသူအမှန်တကယ်ရရှိသောသာမန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ (အမြတ်အစွန်းပျောက်ဆုံးခြင်းကဲ့သို့သောအထူးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုမပါ) ကန့်သတ်ထားသည်။ လျော်ကြေးပေးရမည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများမှာလတ်တလောတစ်နှစ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအချိန်တွင်အသုံးပြုသူကကုမ္ပဏီသို့အမှန်တကယ်ပေးဆောင်သည့်အသုံးပြုမှုအခကြေးငွေစုစုပေါင်းပမာဏဖြစ်သည် (ကန်ထရိုက်ကာလသည်တစ်နှစ်မပြည့်လျှင်စာချုပ်ကာလ) ဖြစ်သည်။ ကန့်သတ်ချက်ပါပဲထို့အပြင်ဤဆောင်းပါးသည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ပျက်ကွက်မှုအာမခံအတွက်တာဝန်ယူမှု၊ မူလအခြေအနေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်တာ ၀ န်ယူမှု၊
၆။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုစနစ်တကျလည်ပတ်ရန်နှင့်စီမံရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှု၏လုပ်ငန်းအားလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားတတိယပုဂ္ဂိုလ်အားလိုအပ်သောလိုအပ်ချက်အရကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စွန့်စားမှုဖြင့်ခွဲထုတ်နိုင်သည်။ဤကိစ္စတွင်၊ ကန်ထရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူသည်ဤသဘောတူညီချက်အရကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူတူပင်တာ ၀ န်ရှိသည်။
၇။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုမှန်ကန်စွာလည်ပတ်စေရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်ကုမ္ပဏီတွင်လိုအပ်သောအခွင့်အာဏာရှိရမည်။
■အပိုဒ် ၁၄ (ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှအသုံးပြုမှုကိုရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ စာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းခြင်း)
၁။ အကယ်၍ အသုံးပြုသူသည်အောက်ဖော်ပြပါအချက်တစ်ချက်အောက်သို့ကျရောက်ပါကအသုံးပြုသူသည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုမှထုတ်လုပ်သောအခကြေးငွေများအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဆိုပါကကုမ္ပဏီသည်ဤစာချုပ်ကိုချက်ချင်းပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမလိုအပ်ပါ။ ဆုံးရှုံးရလိမ့်မည်။
se သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ယာယီသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ယာယီနေရာချထားခြင်းသို့မဟုတ်လေလံပွဲအတွက်တောင်းခံမှုရှိလျှင်သို့မဟုတ်အခွန်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအများပြည်သူအာဏာပိုင်များကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါ။
rupt ဒေဝါလီခံခြင်းဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုများ၊ လူထုအခြေပြုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုများ၊
(၆) စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အစည်း (သို့) အရင်းအနှီးဖွဲ့စည်းပုံတွင်သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကုမ္ပဏီ၏ချောချောမွေ့မွေ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုနှောင့်နှေးစေမည့်အန္တရာယ်ရှိသည့်အခါ။
this အကယ်၍ သင်သည်ဤသဘောတူညီချက်သို့မဟုတ်သီးခြားသတ်မှတ်ထားသောစာချုပ်ပါတာဝန်ဝတ္တရားများကိုချိုးဖောက်ပါက
service အသုံးပြုသူမှဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီ၏ဂုဏ်သိက္ခာသို့မဟုတ်ဂုဏ်သိက္ခာကိုပျက်စီးစေနိုင်သောအန္တရာယ်ရှိပါက။
the ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသောနည်းလမ်းသည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကွဲလွဲနေသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကုမ္ပဏီအတွက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိပါကအချိန်ကာလအတော်အတန်သတ်မှတ်ပြီးနောက်ပြင်ဆင်သူအသိပေးချက်ကိုတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါ။
၂။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှေ့အပိုဒ်ပါပြprovisions္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီရပ်ဆိုင်းသောအခါအသုံးပြုသူအားအကြောင်းပြချက်၊ ရက်စွဲနှင့်အသုံးပြုမှုကိုရပ်ဆိုင်းခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းအားရပ်ဆိုင်းခြင်းကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားပါမည်။သို့ရာတွင်၊ ထိုကဲ့သို့သောအရေးပေါ်အခြေအနေကဲ့သို့သော ရှောင်လွှဲ၍ မရသောအခြေအနေများတွင်ဤအရာသည်သက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။
၃။ ဤဆောင်းပါးအရစာချုပ်အားဖျက်သိမ်းခြင်းသည်အသုံးပြုသူ၏ကုမ္ပဏီအတွက်ပေးဆပ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ဖျက်သိမ်းသည့်အချိန်တွင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်သောငွေပေးချေမှုတာဝန်ကိုအသုံးပြုသူသည်တာဝန်ရှိသည်။
၄။ ဤဆောင်းပါး၏ပြprovisions္ဌာန်းချက်များသည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုအပေါ်အခြေခံသောကန်ထရိုက်အားလုံးအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေရမည်။
■အပိုဒ် ၁၅ (အသုံးပြုသူ၏တာဝန်ယူမှု)
အကယ်၍ အသုံးပြုသူသည်ဤသဘောတူညီချက်အားဖောက်ဖျက်ခြင်းသို့မဟုတ်အပိုဒ် ၁၄ (ကုမ္ပဏီမှအသုံးပြုမှုကိုရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ စာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းခြင်း) ကြောင့်အပျက်အစီးများကြောင့်ကုမ္ပဏီအားပျက်စီးစေလျှင်အပိုဒ် ၁ အနေဖြင့်အသုံးပြုသူမှလျော်ကြေးပေးရမည်။ ။ထို့အပြင်၊ ဤအကြောင်းပြချက်များကြောင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ပြaနာဖြစ်ပွားပါကအသုံးပြုသူ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်တာ ၀ န်ခံမှုဖြင့်ဖြေရှင်းရမည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်မည်သည့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအတွက်မျှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
■အပိုဒ် ၁၆ (သဘောတူညီချက်ပြောင်းလဲခြင်း)
၂။ ကုမ္ပဏီသည်ဤသဘောတူညီချက်ကိုပြောင်းလဲသည့်အခါကုမ္ပဏီသည်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလအတွင်းအသုံးပြုသူသည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှု (သို့) မှတ်ပုံတင်သည့်အခါပြောင်းလဲသွားသောအကြောင်းအရာများနှင့်ပြောင်းလဲသည့်အကြောင်းအရာကိုအသိပေးအကြောင်းကြားပြီးနောက်သုံးစွဲသူအားအကြောင်းကြားရမည်။ ဖျက်သိမ်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အသုံးပြုသူကဒီသဘောတူညီချက်၏ပြောင်းလဲမှုကိုသဘောတူညီခဲ့ပြီမှတ်ယူလိမ့်မည်။ထို့အပြင်ဤသဘောတူညီချက်အပေါ် အခြေခံ၍ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်သောအခွင့်အရေးများနှင့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများသည်သဘောတူညီချက်အပြောင်းအလဲကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိပါ။
■အပိုဒ် ၁၇ (လူမှုရေးအင်အားစုများမှဖယ်ထုတ်ခြင်း)
(၁) (၁) လူဆိုးဂိုဏ်း၊ (၂) လူဆိုးဂိုဏ်း၊ (၃) ဂိုဏ်းဝင်အဖွဲ့ဝင်များကို (၅) နှစ်မပြည့်သောသူများ၊ ()) လူဆိုးဂိုဏ်းသားများ၊ (၅) ဂိုဏ်းနှင့်ဆက်စပ်သောကုမ္ပဏီများ၊ (၂) အထွေထွေ အစည်းအဝေး (ⅶ) လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများ၊ (ⅷ) အထူးအသိဉာဏ်ရှိသောအကြမ်းဖက်အုပ်စုများ (စ)၊ (ⅸ) သို့မဟုတ်အခြားညီမျှသောပုဂ္ဂိုလ်များ (အောက်တွင်“ လူမှုဆန့်ကျင်ရေးအင်အားစုများ”) ဟုမဆိုမကျစေရ။
- လူမှုရေးဆိုင်ရာလူမှုအင်အားစုများသည်စီမံခန့်ခွဲမှုတွင်များစွာပါ ၀ င်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည့်ဆက်ဆံရေးရှိခြင်း။
- ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်းစသည်တို့တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းသို့မဟုတ်လူမှုရေးအင်အားစုများအတွက်အဆင်ပြေစေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းဟုအသိအမှတ်ပြုသောဆက်ဆံရေးရှိခြင်း။
- စီမံခန့်ခွဲမှုတွင်သိသိသာသာပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည့်အမှုဆောင်များ (သို့) ပုဂ္ဂိုလ်များသည်လူမှုရေးဆိုင်ရာလူမှုအင်အားစုများကိုလူမှုရေးအရဝေဖန်သင့်သောဆက်ဆံရေးရှိသည်။
၃။ အကယ်၍ ဤစာချုပ်သည်ယခင်စာပိုဒ်ပါပြpursuant္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီဖျက်သိမ်းပါကဖျက်သိမ်းသူသည်အခြားသူအားအခြားပါတီ၏ထိခိုက်နစ်နာမှုအတွက်လျော်ကြေးပေးရမည်။ထို့အပြင်၊ ဤသဘောတူစာချုပ်သည်အပိုဒ် ၂ ပါပြpursuant္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီဖျက်သိမ်းပါကဖျက်သိမ်းခံရသူသည်ဖျက်သိမ်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အခြားသူအားအရေးယူခြင်းမပြုရ။
■အပိုဒ် ၁၈ (ပြိုကွဲခြင်း)
ဤသဘောတူစာချုပ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်၎င်းအစိတ်အပိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်တရား ၀ င်ခြင်းဖြင့်မမှန်ကန်ကြောင်းသို့မဟုတ်အတည်မပြုနိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားလျှင်သော်မှဤသဘောတူညီချက်၏ကျန်ရှိသောပြprovisions္ဌာန်းချက်များနှင့်မမှန်ကန်ကြောင်းသို့မဟုတ်အတည်မပြုနိုင်သောဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ကျန်အစိတ်အပိုင်းများသည် ဆက်လက်၍ အပြည့်အ ၀ ဆက်လက်တည်ရှိနေမည် ။
■အပိုဒ် ၁၉ (ဆွေးနွေးရန်ကိစ္စများ)
ဤသဘောတူစာချုပ်တွင်မဖော်ပြထားသောကိစ္စရပ်များသို့မဟုတ်ဤသဘောတူညီချက်ပါပြor္ဌာန်းချက်တစ်ခုစီ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်ပါကအသုံးပြုသူနှင့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းရမည်။
■အပိုဒ် ၂၀ (သဘောတူညီချက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်)
■အပိုဒ် ၂၁ (အုပ်ချုပ်မှုဥပဒေ)